साप्ताहिक संवाददाता , आश्विन २७, २०७४
हलिउड तथा बलिउडका चलचित्रमा देखिने भीएफएक्स अचेल नेपाली चलचित्रमै देख्न पाइन्छ । भिजुअल इफेक्ट्स, डिजिटल फिल्म मेकिङ तथा मोसन ग्राफिक्स अध्ययन गरेका प्राविधिकहरूका कारण यो सम्भव भएको हो । नेपाली चलचित्रका निकै कम भीएफएक्स आर्टिस्ट तथा मोसन ग्राफिक्स डिजाइनरमध्येका एक हुन्— सुदीप आचार्य । पुरा पढ्नुहोस्
हिलेसम्म हाम्रो सम्बन्ध ठिक छ तर मलाई उसले धोका दिने हो कि भन्ने डर लागिरहन्छ । उसले मेरा लागि मभन्दा पहिलेकी गर्लफ्रेन्ड छोडेको थियो । कतै अन्य युवतीप्रति आकर्षित भएर उसले मलाई छाड्ने त होइन भन्ने लागिरहन्छ । के एकपटक कसैलाई धोका दिइसकेको मान्छेले पटक–पटक धोका दिन्छ ? पुरा पढ्नुहोस्
असोज २७ देखि कार्तिक २ गतेसम्मको साप्ताहिक राशीफल
ज्यो. प. रामप्रसाद सिटौला , आश्विन २७, २०७४
असोज २९ गते : रमा एकादशी व्रत, असोज ३१ गते : यमपञ्चक आरम्भ, कागतिहार, धनत्रयोदशी, कात्तिक १ गते : कुकुर तिहार, कात्तिक २ गते : लक्ष्मीपूजा, कात्तिक ३ गते : गोवद्र्धन पूजा, म्हपूजा, कात्तिक ४ गते : भाइटीका । पुरा पढ्नुहोस्
बैंक लुट्ने विषयमा धेरै चलचित्र निर्माण भएका छन् । यो साता प्रदर्शन हुने बलिउड चलचित्र ‘राँची डायरिज’ बैंकको एटीएम मेसिन लुट्ने विषयमा आधारित छ । हास्य प्रधान यो चलचित्रमा आर्थिक समस्यामा परेका चार युवक तथा एक युवतीले बैंकको एटीएम लुट्ने योजना बनाउँछन् । पुरा पढ्नुहोस्
ज्याकी च्याङ विगत चार दशकदेखि चिनियाँ चलचित्र हुँदै हलिउडसम्म छाएका छन् । उमेर ढल्कदै गए पनि आफ्नो एक्सन छविलाई कम हुन दिएका छैनन् च्याङले । गत वर्ष बलिउडका कलाकारहरूसँग उनले चलचित्र ‘कुङ्फु योगा’मा बलिउड स्टाइलमा काम गरेर प्रशंसा बटुले । पुरा पढ्नुहोस्
दीपावली डान्स पार्टी
मिति : असोज २७ गते, शुक्रबारस्थान : चनौली पार्टी प्यालेस एन्ड बम्बु कटेज, भरतपुर, चितवन समय : साँझ ५ बजे पुरा पढ्नुहोस्
आज पोखरामा राजु लामा
आज असोज २७ गते शुक्रबार राजु लामाले पोखरा घन्काउँदै छन् । मंगोलियन हर्ट ब्यान्डका साथमा पोखरा लेकसाइडस्थित त्रिसरा रेस्टुराँमा उनले आफ्नो प्रस्तुति दिनेछन् । उक्त अवसरमा नियमित रूपमा शुक्रबार आफ्नो प्रस्तुति दिँदै आएको अराइज ब्यान्डले समेत वातावरण तताउनेछ । पुरा पढ्नुहोस्
पोखरा प्रदर्शनी केन्द्र, नयाँबजार, पोखरामा हुने उक्त कन्सर्टमा नेपाल आइडल बुद्ध लामा, फस्ट रनर्सअप निसान भट्टराई तथा सेकेन्ड रनर्सअप प्रताप दासले प्रस्तुति दिनेछन् भने साथमा सागर आले र सन्ध्या जोशीको प्रस्तुति थप आकर्षण हुनेछ । पुरा पढ्नुहोस्
कोरियामा नेपाली चित्रकला
बबरमहलस्थित आर्ट काउन्सिलमा इन्टरनेसनल वाटर कलर सोसाइटी नेपालले आयोजना गरेको दोस्रो वार्षिक चित्रकला प्रदर्शनीमा नेपालको चित्रण गरिएको छ । ३८ जना कलाकारको सहभागिता रहेको उक्त प्रदर्शनीमा ४० भन्दा बढी चित्र समावेश छन् । प्रदर्शनी आज शुक्रबारसम्म चल्नेछ । पुरा पढ्नुहोस्
चराहरूको उक्त सम्मेलनको धेरैमध्ये एउटा उद्देश्य हो चराहरूको राजाको खोजी । नाटक ‘चराहरूको सम्मेलन’ पर्सियाका सुफी कवि फरिद उद्दीन अत्तरद्वारा लिखित नाटकको नेपाली अनुवाद हो । पुरा पढ्नुहोस्